भुकम्प पीडितको सहयोगार्थ हुने कार्यक्रममा मनिषा कोइराला युके आउने
लण्डन । नेपालका भुकम्प पीडितको सहयोगार्थ लण्डनमा हुन लागेको च्यारिटी कार्यक्रममा भाग लिन अभिनेत्री मनिषा कोइराला युके अाउने भएकी छिन् । लण्डनस्थित नेपाली कलाकारहरुको संस्था अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज युके र थर्ड आइ नामक...
पराजयसंगै नेपाली क्रिकेटलाई अर्को झट्का, यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा समातिए टिमका फिजियो
आयरल्याण्ड (वेलफास्ट) । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका फिजियो भारतीय नागरिक डा. अइजाज बसिर असाइ यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा पक्राउपछि जमानतमा रिहा भएका छन् । गत मंगलबार आयरल्याण्डस्थित नेपाली क्रिकेट टिमसहित आफू बसिरहेको ला मोन होटलमा मसाज...
लन्डन । बेलायतमा चिरपरिचित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका एकजना प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदी (ओविइ) भूकम्प पीडितको सहयोगार्थ हिंड्ने भएका छन् । नेपाल र बेलायतमा काम गर्ने एउटा ब्रिटिश च्यारिटी संस्था ब्रिटेन नेपाल मेडिकल ट्रष्टका लागि १०० किमी इपिक...
एनआरएनलाई मताधिकार दिनुपर्छ: खेतान
हाल बेलायत भ्रमणमा रहेका नेपाल ब्रिटेन च्याम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष तथा पूर्व सभासद राजेन्द्र खेतानले नयाँ बन्ने संविधानमा उहाँले गैरआवासीय नेपालीहरुकालागि सम्पत्तीको हक, यात्राको हक तथा मताधिकार सहितको नागरिकता दिन कुनै अप्ठेरो नहुने बताएका छन् ।...
ग्रेटर रसमोर नेपाली कम्युनिटी र प्रहरी प्रशासनबीच भेटघाट
फानबोरो । ग्रेटर रसमोर नेपाली कम्युनिटी पदाधिकारीले स्थानीय प्रहरी प्रशासनसंग भेटघाट एवं परिचयात्मक कार्यक्रम गरेका छन् । रसमोर बरो काउन्सिलका कम्युनिटी डेभलप्मेण्ट अफिसर लुइस वेवर र रसमोरका चिफ इन्स्पेक्टर आनबेल बेरीको निमन्त्रणमा ग्रेटर रसमोर...
भूपू नेपाली सैनिकहरुको भेलामा उठ्यो ११५० पाउण्ड
लन्डन । भूतपूर्व नेपाली सैनिक संगठन बेलायतको आइतबार सम्पन्न बीबीक्यू भेलामा च्यारिटीका लागि एकहजार एकसय ५० पाउण्ड संकलन भएको छ । करिब २० परिवार सहभागी उक्त भेलामा होम्स् फर ह्यूम्यानिटी च्यारिटीका लागि उक्त रकम...
आयरल्याण्डमा नेपाल घुम्न योग्य भएको सुनाउंदै दूतावास
लन्डन । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले सोमबार आयरल्याण्डको डब्लिनमा पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम गरेको छ । महाभूकम्पपछि नेपालको पर्यटन प्रवर्धन एवं पर्यटकका लागि नेपाल योग्य गन्तव्य हो भन्ने प्रचार प्रसार गर्न कार्यक्रम गरिएको हो । आयरल्याण्डको पुरानो...
दीपक श्रेष्ठले कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने
लन्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतका सदस्य दीपक श्रेष्ठले आगामी नेतृत्वका लागि कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । संघको आगामी सेप्टेम्बर २० मा हुने निर्वाचनका लागि यतिखेर उम्मेदवारी दिने लहर चलिरहेका बेला...
लण्डन । एनआरएनए यूकेको भावी नेतृत्वका लागि पहिलोपटक अध्यक्षमा लड्ने उद्घोष गरेका तमु धिं यूकेका पूर्व अध्यक्ष मुछेत्र गुरुङले आफू पछि नहट्ने बताएका छन् । तमु धिं यूकेका निवर्तमान अध्यक्ष कमल गुरुङले संघको आर्थिक...
रेडिङमा नेपालका वरिष्ठ गायकहरु सम्मानित
लन्डन । रोयल अल्बर्ट हलमा कन्सर्ट गर्न आएका कलाकार मध्ये वरिष्ठ गायकहरु दीप श्रेष्ठ, ओमविक्रम विष्ट र योगेश्वर अमात्य सम्मानित भएका छन् । पासा पुचः गुठी रेडिङले उनीहरुलाई थेम्स् भ्याली पार्कमा आयोजित एक कार्यक्रममा...
प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव दिन दूतावासको आग्रह
लन्डन । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले निर्माणाधिन नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव प्रतिक्रिया दिन सबैमा आग्रह गरेको छ । सोमबार जारी अत्यन्त जरुरी सूचना मार्फत दूतावासले नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा नेपाल...
लन्डन । लन्डनबाट सञ्चालित लन्डन नेपाल न्यूज डटकमले नेपालका वरिष्ठ पत्रकार कविर राणालाई सम्मान गरेको छ । आइतबार ब्लु अर्किड रेष्टुरेन्टमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच देशान्तर साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक राणालाई सम्मान गरिएको हो । राणालाई...
« अघिल्ला 1 … 279 280 281 282 283 … 341 पछिल्ला »